कोरोनाभाइरसमा Q&A (COVID-19) - MR PSB
FILMMAKER – IT Professional – Consultant
Crowd1 in Nepal
कोरोनाभाइरसमा Q&A (COVID-19)
कोरोनाभाइरस केसहरू: 106,200
पुन: प्राप्ति: 60,190
कोरोनाभाइरस भनेको के हो?
कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो परिवार हो जुन पशुहरू वा मानवहरूमा बिरामी हुन सक्छ। मानवमा, धेरै कोरोनाभाइरोसलाई सामान्य चिसोदेखि लिएर मध्यपूर्व रेस्पीरेटरी सिन्ड्रोम (एमईआरएस) र गम्भीर तीव्र श्वासप्रश्वास सिंड्रोम (सार्स) जस्ता बढी गम्भीर रोगहरू सम्म श्वासप्रणाली संक्रमणको लागि प्रख्यात छ। सब भन्दा भर्खरै पत्ता लागेका कोरोनाभाइरस कोरोनाभाइरस रोग COVID-19 कारण गर्दछ।
COVID-19 के हो?
कोविड १ संक्रामक रोग हो जुन भर्खरको पत्ता लागेको कोरोनाभाइसले पत्ता लगायो। यो नयाँ भाइरस र रोग अक्टूबर २०१ in मा चीनको वुहानमा शुरू हुनु अघि अज्ञात थियो।
COVID-19 को लक्षणहरू के छन्?
COVID-19 को सामान्य लक्षणहरू ज्वरो, थकान र सुख्खा खोकी हो। केही बिरामीहरूलाई दुखाइ र दुखाइ, नाकको भीड, बहेको नाक, घाँटी दुखाइ वा पखाला हुन सक्छ। यी लक्षणहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन् र बिस्तारै सुरू हुन्छन्। केही व्यक्ति संक्रमित हुन्छन् तर कुनै लक्षण विकास गर्दैनन् र अस्वस्थ महसुस गर्दैनन्। अधिकांश व्यक्तिहरू (करीव %०%) विशेष उपचारको आवश्यकता बिना रोगबाट मुक्त हुन्छन्। COVID-19 हुने प्रत्येक people जना मध्ये १ गम्भीर बिरामी हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। पाको उमेरका व्यक्तिहरू र उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या वा मधुमेहजस्ता अन्तर्निहित चिकित्सा समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई गम्भीर रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। ज्वरो, खोकी र सास फेर्न कठिनाई भएको व्यक्तिहरूले चिकित्सा उपचार लिनु पर्छ।
COVID-19 कसरी फैलिन्छ?
व्यक्तिले COVID-१ catch लाई समात्न सक्छन् जो भाइरस छन्। नाक वा मुखबाट साना थोप्लाहरू मार्फत यो व्यक्ति अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्छ जुन COVID-१ with खोकी वा श्वास छोड्ने बित्तिकै फैलिन्छ। यी थोपाहरू वस्तु र सतहमा व्यक्ति वरिपरिको हुन्छन्। अन्य व्यक्तिहरूले COVID-19 समातेर यी वस्तुहरू वा सतहहरू छोएर, त्यसपछि तिनीहरूका आँखा, नाक वा मुख छोए। मानिसहरूले COVID-19 लाई समात्न सक्छन् यदि तिनीहरूले COVID-19 भएको व्यक्तिबाट थोपामा सास फेर्छन् जसले खोकी निकाले वा थोपा छोड्दछ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि बिरामी व्यक्तिबाट १ मिटर (feet फिट) भन्दा टाढा रहन।
WHO ले COVID-१ spread फैलिएको तरिकाहरूको बारेमा चलिरहेको अनुसन्धानको मूल्या .्कन गर्दैछ र अद्यावधिक खोजहरू साझा गर्न जारी राख्दछ।
के COVID-19 लाई निम्त्याउने भाइरस हावा मार्फत प्रसारित गर्न सकिन्छ?
आजको अध्ययनले देखायो कि भाइरस जसले COVID-19 लाई निम्त्याउँछ मुख्यतया हावाबाट नभई श्वासप्रश्वासका थोप्लाहरू मार्फत संक्रमित हुन्छ। अघिल्लो उत्तर हेर्नुहोस् “COVID-19 कसरी फैलिन्छ?”
CoVID-19 कुनै लक्षण नभएको व्यक्तिबाट पक्रिन सकिन्छ?
रोग फैलनेको मुख्य तरिका भनेको श्वासप्रश्वासको थोपाबाट जो कोही खोक्राबाट बहिष्कार गरिएको हो। कुनै लक्षण नभएको कसैबाट COVID-19 लाई समात्ने जोखिम एकदम कम छ। यद्यपि, धेरै व्यक्ति COVID-19 को मात्र हल्का लक्षणहरु अनुभव गर्छन्। यो विशेष गरी रोगको शुरुआती चरणहरूमा सत्य हो। तसर्थ COVID-१ someone लाई जो कोहीबाट पकड गर्न सम्भव छ, उदाहरणका लागि, केवल हल्का खान्की र बिरामी महसुस गर्दैन। WHO ले COVID-१ of को प्रसारणको अवधिमा चलिरहेको अनुसन्धानको मूल्या assess्कन गर्दैछ र अद्यावधिक खोजहरू साझा गर्न जारी राख्दछ।
के म CoVID-१ someone लाई कुनै रोगको मलबाट पक्रन सक्छु?
संक्रमित व्यक्तिको मलबाट COVID-19 समात्ने जोखिम कम देखिन्छ। जबकि प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि भाइरस केहि केसहरुमा मलमा देखा पर्न सक्छ, यस मार्गको माध्यमबाट फैलिएको प्रकोपको मुख्य विशेषता छैन। WHO ले COVID-१ spread फैलिने तरिकाहरूमा चलिरहेको अनुसन्धानको मूल्या .्कन गर्दैछ र नयाँ खोजहरू साझा गर्न जारी राख्दछ। किनकि यो जोखिम हो, तथापि, यो बाथरूमको प्रयोग गरेर र खानु अगाडी नियमित रूपमा हातहरू सफा गर्ने अर्को कारण हो।
म आफैंलाई बचाउन र रोगको फैलावट रोक्न म के गर्न सक्छु?
सबैको लागि संरक्षण उपायहरू
COVID-19 प्रकोपमा नवीनतम जानकारीको बारेमा सचेत रहनुहोस्, WHO वेबसाइटमा उपलब्ध छ र तपाईंको राष्ट्रिय र स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकार मार्फत। विश्वभरका धेरै देशहरूले COVID-१ several र धेरैले यसको प्रकोप देखेका छन्। चीन र अन्य केही देशका अधिकारीहरूले तिनीहरूको प्रकोपलाई ढिला बनाउन वा रोक्न सफल भएका छन्। जे होस्, स्थिति अप्रत्याशित छ त्यसैले ताजा समाचारहरूको लागि नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस्।
तपाईं संक्रमित हुने वा COVID-१ spreading फैलाउने सम्भावनाहरू कम गर्न सक्नुहुन्छ केही साधारण सावधानी अपनाएर:
नियमित रूपमा र राम्ररी आफ्ना हातहरू मदिरामा आधारित हातले मालिनुहोस् वा साबुन र पानीले तिनीहरूलाई धोउनुहोस्।
किन? साबुन र पानीले तपाइँको हात धुँदा वा मदिरामा आधारित हात रबसले तपाइँको हातमा भएको भाइरसहरूलाई मार्दछ।
कम्तिमा १ मिटर (feet फिट) दूरी आफु र जोसुकैसँग खोकी वा छींकनेको बीचमा राख्नुहोस्।
किन? जब कसैलाई खोकी लाग्यो वा छींक लाग्यो भने उनीहरूले नाक वा मुखबाट सानो तरल ड्रपलेटहरू स्प्रे गर्दछन् जसमा भाइरस हुन सक्छ। यदि तपाईं धेरै नजिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले COPID-19 भाइरस सहितको थोप्लोमा सास फेर्न सक्नुहुन्छ, यदि खान् गर्नेलाई रोग छ भने।
आँखाहरू, नाक र मुख छोड्नुहोस्।
किन? हातले धेरै सतहहरु लाई छुन्छ र भाइरस लिन सक्छ। एक पटक दूषित भएपछि हातले भाइरसलाई तपाईंको आँखा, नाक वा मुखमा सार्न सक्छ। त्यहाँबाट, भाइरसले तपाईंको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दछ र तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं र तपाईका वरपरका मानिसहरू राम्रो श्वासप्रश्वासको स्वच्छता अनुसरण गर्नुहोस्। यसको मतलव तपाईको मुख र नाकलाई तपाईको कुमिएको कुहिनो वा टिश्युले ढाकिरहेको छ जब तपाईं खान्की वा छींक गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तुरुन्त प्रयोग गरिएको टिशूको डिस्पोजल गर्नुहोस्।
किन? बूढीले भाइरस फैलायो। राम्रो श्वासप्रश्वासको स्वच्छता पालना गरेर तपाईंले आफू वरपरका मानिसहरूलाई भाइरसहरू जस्तै चिसो, फ्लू र COVID-19 बाट जोगाउनुहुन्छ।
यदि तपाई अस्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ भने घरमै बस्नुहोस्। यदि तपाईंलाई ज्वरो, खोकी र सास फेर्न गाह्रो छ भने, चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस् र अग्रिम कल गर्नुहोस्। तपाईंको स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
किन? तपाईंको क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा राष्ट्रिय र स्थानीय अधिकारीहरूसँग सबैभन्दा पछिल्लो सूचना हुनेछ। अग्रिम कल गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई चाँडो तपाईंलाई सहि स्वास्थ्य सेवामा डाइरेक्ट गर्न अनुमति दिनेछ। यसले तपाइँको रक्षा गर्दछ र भाइरस र अन्य संक्रमणको प्रसार रोक्न मद्दत गर्दछ।
COVID-19 को बारे मा पछिल्ला घटनाक्रम मा सूचित रहनुहोस्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, तपाईंको राष्ट्रिय र स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण वा तपाईंको रोजगारदाताले आफुलाई र अन्यलाई COVID-19 बाट कसरी बचाउने भन्ने बारे दिइएको सल्लाह अनुसरण गर्नुहोस्।
किन? COVID-१ your तपाईंको क्षेत्रमा फैलिएको छ कि छैन भन्ने बारे राष्ट्रिय र स्थानीय अधिकारीहरूसँग सबैभन्दा पछिल्लो सूचना हुनेछ। उनीहरूलाई राम्रो सल्लाह दिन्छन् तपाईको इलाकाका व्यक्तिहरूले आफुलाई बचाउन के गर्नुपर्छ।
पछिल्लो COVID-19 हटस्पटहरू (शहरहरू वा स्थानीय क्षेत्रहरू जहाँ COVID-19 व्यापक रूपमा फैलँदै छ) मा अद्यावधिक रहनुहोस्। यदि सम्भव छ भने, स्थानहरूमा यात्रा गर्नबाट बच्नुहोस् – विशेष गरी यदि तपाईं वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ वा मधुमेह, मुटु वा फोक्सोको रोग हो।
किन? तपाईंसँग यी मध्ये कुनै एकमा COVID-१ catch समात्ने उच्च सम्भावना छ
COVID-19 फैलिएको क्षेत्रहरुमा वा भर्खरको (विगत १ days दिन) भ्रमण गरेका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षा उपायहरू
माथि उल्लिखित निर्देशन अनुसरण गर्नुहोस् (सबैका लागि सुरक्षा उपायहरू)
यदि तपाई अस्वस्थ महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ भने घरमा बस्दै आत्म-पृथक गर्नुहोस्, हल्का लक्षणहरू जस्तै टाउको दुख्ने, कम ग्रेड ज्वरो (37 37. C सेन्टिग्रेड वा माथिको) र हल्का नाकबाट बग्ने नाकबाट तपाई निको नहुनु भएसम्म। यदि कसैको लागी तपाईको लागी सामान ल्याउन वा बाहिर जान को लागी आवश्यक छ भने, जस्तै। खाना किन्नको लागि, त्यसपछि मास्क लगाउनुहोस् अन्य मानिसहरूलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन।
किन? अरूसँग सम्पर्क बेवास्ता गर्नु र मेडिकल सुविधाहरूको भ्रमण गर्नु यी सुविधाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईं र अन्यहरूलाई सम्भावित COVID-19 र अन्य भाइरसहरूबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंलाई ज्वरो, खोक्रा र सास फेर्न गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् किनकि यो सास फेर्ने संक्रमण वा अन्य गम्भीर अवस्थाको कारणले हुन सक्छ। अग्रिम कल गर्नुहोस् र तपाईंको प्रदायकलाई कुनै भर्खरको यात्रा वा यात्रुहरूसँगको सम्पर्क बताउनुहोस्।
किन? अग्रिम कल गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई चाँडो तपाईंलाई सहि स्वास्थ्य सेवामा डाइरेक्ट गर्न अनुमति दिनेछ। यसले COVID-19 र अन्य भाइरसहरूको सम्भावित प्रसार रोक्न मद्दत गर्दछ।
म कसरी COVID-19 लाई समात्न सक्छु?
जोखिम तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ – र अधिक विशेष रूपमा, त्यहाँ एक COVID-19 प्रकोप त्यहाँ देखिन्छ कि।
अधिकांश स्थानहरूमा धेरै मानिसहरूलाई COVID-19 समात्ने जोखिम अझै कम छ। यद्यपि, संसारभरि ठाउँहरू (शहर वा क्षेत्रहरू) जहाँ रोग फैलिरहेको छ। बसोबास गर्ने, वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि यी क्षेत्रहरू COVID-19 समात्ने जोखिम बढी हुन्छ। COVID-19 को एक नयाँ केस पहिचान भएपछि सरकारहरू र स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जबरजस्ती कदम चालेको छ। यात्रा, आन्दोलन वा ठूला जमघटमा भएका कुनै पनि स्थानीय प्रतिबन्धहरूको पालना गर्न निश्चित हुनुहोस्। रोग नियन्त्रण प्रयासहरूसँग सहकार्य गर्दा तपाईंको COVID-19 लाई समात्ने वा फैलाउने जोखिम कम हुनेछ।
COVID-19 प्रकोप समाहित गर्न सकिन्छ र प्रसारण रोक्न सकिन्छ, जस्तो कि चीन र केही अन्य देशहरूमा देखाईएको छ। दुर्भाग्यवस, नयाँ प्रकोप द्रुत रूपमा उदय हुन सक्छ। तपाइँ जहाँ हुनुहुन्छ वा जानको लागि इरादा गर्नु भएको स्थिति बारे सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। डब्ल्यूएचओ विश्वव्यापी COVID-19 स्थिति मा दैनिक अपडेट प्रकाशित गर्दछ।
मैले COVID-19 को बारे मा चिन्ता गर्नुपर्छ?
कोविड -१ infection संक्रमणको कारण बिरामी सामान्यतया हल्का हुन्छ, विशेष गरी बच्चाहरू र युवा वयस्कहरूको लागि। यद्यपि यसले गम्भीर बिरामीलाई निम्त्याउन सक्छ: हरेक people जनामा ​​१ जो यसलाई समात्छन् तिनीहरूलाई अस्पताल हेरचाह आवश्यक पर्दछ। त्यसैले COVID-19 प्रकोपले उनीहरूलाई र आफ्ना प्रियजनहरूलाई कसरी असर गर्दछ भनेर चिन्तित हुनु सामान्य सामान्य हो।
हामी हाम्रा सरोकारहरू स्वयं, हाम्रो प्रियजनहरू र हाम्रो समुदायहरूको सुरक्षा गर्नको लागि कार्यहरूमा च्यानल गर्न सक्छौं। यी कार्यहरू मध्ये पहिलो र प्रमुख यो नियमित र राम्रा हात धुने र राम्रो श्वासप्रशोधन स्वच्छता हो। दोस्रो, जानकारी दिनुहोस् र यात्रा, आन्दोलन र भेलामा राखिएको कुनै प्रतिबन्ध सहित स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सल्लाह अनुसरण गर्नुहोस्।
गम्भीर बिरामी हुने जोखिममा को छ?
जब हामी COVID-२०१ 2019 ले व्यक्तिलाई कसरी असर गर्छ भन्ने बारेमा हामी अझै सिक्दैछौं, वृद्ध व्यक्तिहरू र पूर्व-अवस्थित चिकित्सा सर्तहरू (जस्तै उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फोक्सोको रोग, क्यान्सर वा मधुमेह) को लागी अरू भन्दा गम्भीर रोग देखा पर्दछ।
के एन्टिबायोटिकहरू COVID-19 लाई रोक्न वा उपचारमा प्रभावकारी छन्?
होइन। एन्टिबायोटिक भाइरसहरू विरुद्ध काम गर्दैन, तिनीहरू केवल ब्याक्टेरिया संक्रमणहरूमा काम गर्छन्। COVID-19 भाइरसको कारणले हुन्छ, त्यसैले एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। एन्टिबायोटिकहरू COVID-19 को रोकथाम वा उपचारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तिनीहरू केवल एक ब्याक्टेरिया संक्रमण को उपचारको लागि एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित को रूप मा प्रयोग गर्नु पर्छ।
के त्यहाँ COVID-19 को खोप, औषधि वा उपचार छ?
अझै होईन। आज सम्म, त्यहाँ कुनै खोप छैन र COVID-२०१ 2019 लाई रोक्न वा उपचार गर्न कुनै विशेष एंटीवायरल औषधि छैन। यद्यपि, प्रभावित व्यक्तिले लक्षणहरू कम गर्नका लागि हेरविचार गर्नुपर्छ। गम्भीर बिरामी भएका व्यक्तिलाई अस्पतालमा भर्ती गर्नुपर्दछ। प्रायः बिरामीहरू सहयोगी हेरचाहको लागि धन्यवाद पुनःप्राप्ति गर्दछन्।
सम्भावित खोपहरू र केही खास औषधि उपचारहरू अनुसन्धान अन्तर्गत छन्। तिनीहरू क्लिनिकल परीक्षण मार्फत परीक्षण भइरहेको छ। WHO ले COVID-19 लाई रोक्न र उपचार गर्न खोपहरू र औषधिहरू विकास गर्न प्रयासहरू समन्वय गर्दैछ।
COVID-१ against बिरूद्ध आफूलाई र अरूलाई बचाउने सब भन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू भनेको तपाईका हातहरू बारम्बार सफा गर्नुहोस्, कुकुर वा टिश्युको ब with्गाले तपाईको खोकीलाई ढाक्नुहोस्, र कफको खालका मानिसबाट कम्तिमा १ मिटर (feet फिट) को दूरी राख्नुहोस्। छींक लाग्दो।
के COVID-19 SARS जस्तै छ?
होइन। COVID-19 लाई निम्त्याउने भाइरस र गम्भिर तीव्र श्वासप्रश्वास सिंड्रोम (SARS) को कारण गर्ने एक एक अर्कोलाई आनुवंशिक रूपमा सम्बन्धित छ, तर तिनीहरू फरक छन्। SARS अधिक घातक हो तर COVID-19 भन्दा धेरै संक्रामक हो। २००AR देखि विश्वमा कतै सार्सको प्रकोप भएको छैन।
के मैले आफूलाई बचाउन मास्क लगाउनु पर्छ?
केवल मास्क लगाउनुहोस् यदि तपाईं COVID-१ symptoms लक्षणहरू (विशेष गरी खान्की) बाट बिरामी हुनुहुन्छ वा कसैलाई COVID-१ have को हेरविचार गर्दै हुनुहुन्छ। डिस्पोजेबल अनुहार मास्क एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्न वा बिरामीको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मास्क खेर फालिरहनु भएको छ। मास्कको विश्वव्यापी अभाव छ, त्यसैले डब्ल्यूएचओ ले मानिसहरूलाई मास्क चलाउन बुद्धिमानीपूर्वक अनुरोध गर्दछ।
डब्ल्यूएचओले मूल्यवान संसाधनहरूको अनावश्यक बर्बादी र मास्कको गलत प्रयोगबाट जोगिनका लागि मेडिकल मास्कको तर्कसंगत उपयोग गर्न सल्लाह दिन्छ (मास्कहरूको प्रयोगको लागि सल्लाह हेर्नुहोस्)।
COVID-१ against बिरूद्ध आफूलाई र अरूलाई बचाउने सब भन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू भनेको तपाईका हातहरू बारम्बार सफा गर्नु, तपाईको खांसीलाई कुहिनो वा टिश्युको ब with्गाले छोप्नु र कफ वा कान्छीबाट कम्तिमा १ मिटर (feet फिट) को दूरी राख्नु हो। । थप जानकारीको लागि नयाँ कोरोनाभाइरस विरुद्ध आधारभूत सुरक्षात्मक उपायहरू हेर्नुहोस्।
मास्क कसरी लगाउने, प्रयोग गर्ने, टेक अफ गर्ने र मास्कको डिस्पोज गर्ने काम?
याद राख्नुहोस्, मास्क केवल स्वास्थ्यकर्मीहरू, हेरचाहकर्ताहरू, र श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू जस्तै ज्वरो र खोकीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ।
मास्कमा छुनु भन्दा पहिले, रक्सीको आधारमा हात रब वा साबुन र पानीले हातहरू सफा गर्नुहोस्
मास्क लिनुहोस् र आँसु वा प्वालहरूको लागि निरीक्षण गर्नुहोस्।
ओरिएन्ट कुन साइड शीर्ष तर्फ हो (जहाँ धातु स्ट्रिप छ)।
मास्कको अनुहारको बाहिरी भाग (रंगीन पक्ष) को उचित पक्ष सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको अनुहार मास्क राख्नुहोस्। धातुको पट्टी वा मास्कको कडा किनारा पिन्च गर्नुहोस् ताकि यो तपाईंको नाकको आकारमा ढाल्नेछ।
मास्कको मुनी तल तान्नुहोस् ताकि यसले तपाईंको मुख र तपाईंको चिनो कभर गर्दछ।
प्रयोग पछि, मास्क हटाउनुहोस्; आफ्नो अनुहार र कपडाबाट मास्क टाढा रहँदा, मास्कको सम्भावित दूषित सतहहरूलाई छुनुबाट जोगिन कानको पछाडिबाट लोचिक लुपहरू हटाउनुहोस्।
प्रयोग पछि तुरुन्त बन्द बिनमा मास्क खारेज गर्नुहोस्।
मास्कलाई छोएपछि वा अस्वीकार गरेपछि हात स्वच्छता गर्नुहोस् – मदिरामा आधारित हात रब प्रयोग गर्नुहोस् वा, यदि सफा देखिन्छ भने, आफ्नो हात साबुन र पानीले धुनुहोस्।
COVID-19 को लागि इनक्युबेशन अवधि कति हो?
“इन्क्युबेशन अवधि” भनेको भाइरस समात्ने र रोगका लक्षणहरू हुन सुरू बीचको समय हो। COVID-१ inc को दायरा १-१ days दिन हो, प्राय: पाँच दिनको आसपास। यी अनुमानहरू अद्यावधिक हुनेछ जति धेरै डाटा उपलब्ध हुन्छन्।
के मानिस पशु स्रोतबाट COVID-19 बाट संक्रमित हुन सक्छ?
कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो परिवार हो जुन पशुहरूमा सामान्य हुन्छ। कहिलेकाँही व्यक्तिहरू यी भाइरसहरूद्वारा संक्रमित हुन्छन् जुन त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूमा पनि फैलिन सक्छ। उदाहरण को लागी, SARS-CoV सिभेट बिरालाहरु संग सम्बन्धित थियो र MERS-CoV ड्रमेडरी उँटबाट प्रसारित हुन्छ। COVID-19 को सम्भावित पशु स्रोतहरू अझै पक्का हुन सकेका छैनन्।
आफूलाई बचाउनको लागि, जस्तै प्रत्यक्ष पशु बजारहरूमा जाँदा, जनावरहरूसँग सम्पर्कमा रहेका पशुहरू र सतहहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्। सबै समयमा राम्रो खाद्य सुरक्षा अभ्यासहरू सुनिश्चित गर्नुहोस्। कच्चा मासु, दूध वा पशु अंगहरू सावधानीपूर्वक ह्याण्डल गर्नुहोस् खाना नपकाएको खानालाई प्रदूषणबाट बचाउन र कच्चा वा अण्डकोक्ड पशु उत्पादनहरू खपतबाट जोगिन।
के म मेरो पाल्तु जनावरबाट COVID-19 लाई समात्न सक्छु?
होईन। त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि साथी जनावरहरू र घरपालुवा जनावरहरू जस्तै बिरालाहरू र कुकुरहरू संक्रमित भएका छन् वा भाइरस फैलाउन सक्छ कि COVID-19 कारण।
Things you can do to prevent COVID-19 March 6, 2020
Novel Coronavirus (COVID-19) Situation : Coronavirus Updates March 4, 2020
Coronavirus deaths toll tops 3,000+ March 2, 2020
HELP MR. SHIVA KUMAR MAHAT FIGHTING AGAINST CANCER February 28, 2020
Things you can do to prevent COVID-19
Future of Corona Virus6months from now.
Ayodhya is Located in Nepal
April 29 – 2020 Asteroid 1998-OR2
April 29 – 2020 Asteroid 1998-OR2 April 18, 2020
Future of Corona Virus6months from now. March 12, 2020
कोरोनाभाइरसमा Q&A (COVID-19) March 8, 2020
Copyright © 2020 MR PSB Boost Biz by Theme Palace
Home>World-News>कोरोनाभाइरसमा Q&A (COVID-19)